Chibvumirano chakangotiyeuchidza zvakare nei munhu wese anovenga mafianthe ekutengesa-BGR - TELES RELAY
HOME » upfumi Chinyorwa Chinotiyeuchidza Zvakare Neiko Munhu Wose Anovenga Uterevhizheni Giants - BGR
Chibvumirano chakangotiyeuchidza zvakare nei munhu wese anovenga mafianthe ekutengesa-BGR
Kana iwe uri weCharter's Spectrum yevashandi veIndaneti, gadzirira kugadzirisa mari yako yakawanda kana ukasarudza kubva pabasa.
Mutemo watanga kutarisa vatengi veIndaneti kuburikidza nemashoko ekupedzisira ekubhadhara kwemwedzi - kure kumashure kwekunyora kwakanaka - kuti iwe uchakweretwa kwebasa remwedzi wakakwana apo iwe unogona kubvisa. Panzvimbo pokungobhadhara mari yakawanda.
"Kubudirira kwaJune 23 2019 uye maererano neMitemo yeBasa, Spectrum haichazopi zvinyorwa zvezvikwereti zvezvinhu zvinotengeswa pamwedzi. rakabviswa pamberi pemagumo emwedzi wekubhadhara ikozvino, "iyo kambani yakati mumashoko ayo kune vatengi.
The website Isai Kapu vakatarisa mutauro mberi kwegore rino, vachicherechedza kuti izvi zvinoshanda kunyange kana iwe uchideredza kana kubvisa basa rako pakati pekubhadhara. Izvi, zvechokwadi, zvinofanira kujekesa kuti nguva yakanakisisa yekudzikisa basa rako pasi pemamiriro aya matsva ingadai yava pedyo nekukwanisa kusvika kumugumo wenguva yekubhadhara.
Vamwe vatengi vakambotaura nezveshoko reChirter kune vatengi. kuti iyi nheyo itsva "inopindirana nemamiriro ekushandiswa". Izvi zvinogona kuratidza kuti mutemo unoshanda chete kune terevhizheni terevhizheni isati yasvika uye ikozvino inowedzera kune zvimwe zvikamu zvebhizimisi rekambani.
Comcast, iye oga anokwikwidzana anokosha kupfuura Charter, achiri kutaridzika kutengesa vatengi vep-rated final bill. Uye nepo hurongwa hutsva hweCharter hunoshandiswa kusvikira kune 41 states, pane mitemo kune dzimwe nyika dzinorambidza rudzi urwu rwechinhu. DirecTV, somuenzaniso, haigoni kupfuurira chiito chayo chakafanana chekubhadhara mwedzi wakakwana mushure mekudziviswa mu states seCalifornia neNew York.
Rega iyo rapo yeKap kushungurudza kuti mutemo wakadai seChechi unogona kunyanya kuoma. Mutengi anotsvaga, somuenzaniso, muvhiki yekutanga yekubhadhara mutsva. Muchiitiko ichi, vakashandisa vhiki yebasa asi vaizobhadhara nezvemaawa matatu vasina chavanosha uye vasingashandisi. Kunyange zvakadaro, nzvimbo yacho inoramba ichinyatsocherechedza kuti iyo makambani emakambani emakambani ari kuramba achinyanya kufarira muitiro uyu.
Mufananidzo Wemusoro: Spectrum
Guinea: Mohamed Kagnassy, ​​gorosi emerald yemabhizimusi - JeuneAfrique.com
Zimbabwe kuratidzira GDP mushure mekubvumirwa kwemari itsva
C. RONALDO ACHINOBATSIRWA KUTI MOURINHO ARI PASI PAJUVENTUS - VIDEO
Mutambo wekubatana: apotheosis murugare uye zvakasiyana muBertoua
Tsvakurudzo mutsva inoratidza kuti Netflix yepurogiramu yepakutanga iri nani pane HBO - BGR
20 May 2019 muBuea: Vatungamiri vezvematongerwo enyika vanopesana naBernard Okalia Bilai vachikwirirana
PHOTOS. Apo Princess Victoria weSweden ari kutamba Cristiano Ronaldo mumunda wenhabvu
VANHU & VANHU3,574